हल्का बेशर्मी चल्ता है! - Himalkhabar.com
ब्लगशनिबार, मंसिर १२, २०७२
“नसक्ने भइयो, लास्टै हिनामी गरायो! घर, टोल, गाउँ, शहर, बजार जाँ पुग्दा’नि तिमीहरूको कारण देशै गन्हायो भन्दै छ्याकन हान्छन्”, एक उपप्रमले विलौना गरे।
सुनेर म शीताङ्ग भएँ। नयाँ सरकारमा उप–प्रधानमन्त्रीरूपी बाला लहलह झुलेर नेपालप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय जिज्ञासा ह्वात्तै बढेर विदेशी मित्रहरू ‘आधादर्जन उप–प्रधानमन्त्री भएपछि सार्वजनिक सेवा त जनताको कोठाचोटामै पुग्दो हो’ भन्छन्।
त्यसमाथि, एकै झ्मटमा उपप्रम कारखाना खोल्न सक्ने नेपाललाई झवाँक चलेर औद्योगिक क्रान्ति गरी उत्पादनको खत्यौल लगाइदियो भने आफ्नो बजार कसरी जोगाउने भन्ने गोप्य अजेण्डाले ‘ब्रिक्स’ र जी–२० मा प्रवेश पाएको हल्ला छ।
छ्यासमिसे निर्वाचन प्रणालीको उपहार टालाटुली बटुली सरकारलाई अपजसेहरूले भाङ्ग्राको टोपी ठान्छन् भने पनि चट्टसँग त्यसमा सिउरिएका उपप्रधानमन्त्रीहरू गुँहेलीको फूलको गुच्छा जस्तो देखिन्छन्।
मन्त्रीले नपुगेर उपप्रम खोज्दै घिटघिटिनुको अर्थ देश र जनताको लागि केही गरिछाड्ने हुटहुटी हो। केरुङमा हिउँ परेर व्यवधान आए उपप्रमहरूको बटालियनले नाम्लो लगाएरै भए’नि तेलको गर्जो टारिदिन के बेर!
भत्कोसे जिरह सुनेर हिरिक्क गइएला जस्तो भए’सि म बैठक कक्षबाट बाहिरिएँ। अलिकति पनि नवीनता नभए नेपाल कसरी नयाँ हुन्छ? नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएको ढोल पिट्न पनि ‘समथिङ न्यू’ चाहियो नै।
उपप्रमको बाली फस्टाउँदा नेपालमा संविधानको रेल पटरीमा चढेको दुनियाँले चाल पायो। फेरि, संसदीय व्यवस्थामा जस्तो जम्बो मन्त्रिमण्डल मात्र बनाए ‘सुधारिएको’ फुर्कोको इज्जतै रहन्न।
तसर्थ, सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा संविधानको जिलो जोगाउन सरकाराँ उपप्रमहरू मात्र राख्ने थिति बसालौं। बरु, मन्त्रिमण्डललाई ‘उपप्रमण्डल’ भन्नु परे’नि खुट्टो कमाउने कुरो छैन।
मोबाइलको घण्टी बज्दा म झ्स्किंदै ब्युँतिएँ। भीडसँग पौंठेजोरी खेल्दै दाउरा प्राप्ति फारममा तीनपुस्ते विवरण भरिरहेको वेला एउटा यमानको गिंडुल्को देख्दा भनन्न रिंगटा छुट्यो। बहुरिंदा बिक्री केन्द्र सुनसान थियो।
लोदरे सपनामा देखेझैं कतै दुई/चार थानले ‘उपप्रधानमन्त्री चाहिएन’ भन्दै फ्याट्ट सामूहिक अर्जी हाल्देमा सरकार चुच्चो काटिएको चरो माफिक बुच्चो देखिने सुर्ताले गर्लम्म छोप्यो।
नबेसाउनु बेसाइ सकेपछि घिनाउनु हुन्न, बरु उपप्रमगणको क्षमताको अधिकतम दोहन एवं परिचालन गर्न एउटा सह–प्रधानमन्त्री व्यवस्था गर्न सके जुलूमै असल हुन्थ्यो भन्छु।